Akwụkwọ Hritusharma na Martech Zone |
Edemede site na Hritusharma
Hritusharma bụ blogger freelancer, ọkachamara na teknụzụ imepụta na ngwa ngwa. Ọ dị njikere inyere onye ọ bụla aka ịbụ onye mmebe dịka pro. Ewezuga ịbụ ihe ntanetị, Hritusharma nwere mmasị na vidiyo na foto.
Sunday, Eprel 11, 2021 Monday, April 12, 2021 Hritusharma
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nkuzi na ntanetị ma ọ bụ usoro vidiyo na ịchọrọ ndepụta aka nke ngwa ọrụ na atụmatụ kachasị mma, mgbe ahụ ị ga-ahụ ntụzịaka kachasị mma. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ejiri m aka m nyochaa ma nwalee ọtụtụ ngwaọrụ, ngwaike na ndụmọdụ iji mepụta nkuzi na-aga nke ọma na nkuzi vidiyo iji ree na ịntanetị. Ma ugbu a, ị nwere ike nyochachaa ndepụta a iji chọta ihe ịchọrọ kachasị (enwere ihe